အဆိုပါတစ်ကမ္ဘာလုံးဖလား Format ကိုများနှင့်မည်သို့အလုပ်လုပ်
အဆိုပါ တစ်ကမ္ဘာလုံးဖလား ပြိုင်ပွဲတိုင်းနှစ်နှစ်ကစားနေသည်နှင့်အထီးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဂေါက်သီး၏သင်း, ဥရောပနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုကိုယ်စားပြုသည်အခြားကိုယ်စားပြုတဦးတည်းအဖွဲ့ကဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်နေပါတယ်။ လက်ရှိအသုံးပြုနေသည့်ပုံစံသည်ဤသည်: Play ကိုသုံးရက်ကျော်ရာအရပ်ကိုကြာနှင့်လည်းပါဝင်သည် foursomes , ဘောလုံးလေးလုံးဘိလိယက်ကစားနည်းများ နှင့်ဆိုရင် single ပွဲကစား, 28 ပွဲတစ်ဦးစုစုပေါင်း။
"တစ်ဦးတစ်ယောက်အတွက်" တ vs. -တဦးတည်းကိုဆိုလိုသည် ပွဲစဉ်ကစား ; သူတို့ဘက်နှုန်းနှစ်ခုဂေါက်သီးပါဝင်နေသောကြောင့် foursomes နှင့်ဘောလုံးလေးလုံးဘိလိယက်ကစားနည်းများကိုမကြာခဏ "double ပွဲစဉ်ကစား" ဟုခေါ်ကြသည်။
နှစ်ဆနေ့ရက်များ 1 နဲ့2ကိုကျော်ကစားနေကြသည်; အဆိုပါဆိုရင် single နေ့3ရက်နေ့တွင်အရပျကိုယူပါ။
အသင်းများနှင့်အသင်းရွေးချယ်ရေး: ရေးအဖွဲ့ USA နဲ့အဖွဲ့ဥရောပတစ်ဦးချင်းစီကို 24 ဂေါက်သီးဟာတစ်ကမ္ဘာလုံးဖလားအတွက်ပါဝင်စုစုပေါင်းအောင်, 12 ဂေါက်သီးထားရှိရေး။ တစ်ခုချင်းစီကိုဘက်တစ်အသင်းကပ္ပတိန်ကဦးဆောင်နေသည် အသီးသီးအမေရိက၏ PGA နှင့်ဥရောပခရီးစဉ်ကရှေးခယျြ။ တစ်ခုချင်းစီကိုအသင်းကပ္ပတိန်ကသူ့ကိုယ်ပိုင်လက်ထောက်ဗိုလ်မင်းရွေးချယ်သည်။ ဘယ်လိုတစ်ကမ္ဘာလုံးဖလားအသင်းများကိုရွေးချယ်တော်မူကြသည် ဥရောပအဖွဲ့က USA ကနေအနည်းငယ်ကွဲပြားပေမယ့်အခြေခံကဤနေသောခေါင်းစဉ်: တစ်ခုချင်းစီကိုအသင်းကပ္ပတိန်ကသူ့အသင်းအဘို့အလေးကစားသမားကိုရွေးကောက်ပြီး; အဆိုပါကစားသမား၏ကျန်ရှိသောအချက်များကိုစာရင်း / ပိုက်ဆံစာရင်းပေါ်တွင် အခြေခံ. အလိုအလျှောက်ရွေးချယ်ထားသည်။
အဆိုပါပွဲစဉ်ကို formats foursomes နှင့်ဘောလုံးလေးလုံးဘိလိယက်ကစားနည်းများဖြစ်ကြသည်: နှစ်ဦးစလုံးသည်ဤပွဲစဉ်ကို formats ခြမ်းနှုန်းနှစ်ခုဂေါက်သီးပါ၏ သောပွဲစဉ်နှစ် vs. -နှစ်ခုရှိပါတယ်ဖြစ်ပါသည်။ Foursomes ဖြစ်ပါတယ် အခြားရိုက်ချက် : တစ်ခုချင်းစီဘက်တဦးတည်းဂေါက်သီးဘောလုံးကိုကစား; အဆိုပါလေဖြတ်ကစားခြင်းကြောင့်ဘေးထွက်အခြားပေါ်တွင်ဂေါက်သီး။ ဘောလုံးလေးလုံးဘိလိယက်ကစားနည်းများတွင်တစ်ဘက်မှာအသီးအသီးဂေါက်သီးသူ့ကိုယ်ပိုင်ဘောလုံးကို (ဤအရပ်မှရှိတစ်ဦးချင်းစီတွင်းပေါ်မှာကစားအတွက်လေးခုဘောလုံး, ကိုက်ညီမှုအတွက်တစ်ဦးချင်းစီဂေါက်သီးဘို့တဝတည်းဖြစ်ကြ၏) နှင့်နှစ်ဦးကိုမိတ်ဖက်တို့တွင်နိမ့်ရမှတ်အသင်းရမှတ်အဖြစ်ရေတွက်ပါဝင်သည်။
ဘယ်လိုမှတ်ရရှိခဲ့ပြီးနှင့်ပြိုင်ပွဲအနိုင်ရနေကြသည်: တစ်ခုချင်းစီကိုပွဲစဉ်အနိုင်ရကစားသမားသို့မဟုတ်ခြမ်းမှတယောက်အချက်ကျိုးနပ်သည်။ ချည်ထားသောပြီးအောင်သောကိုက်ညီမှုဟုခေါ်ကြသည် ရှက် တစ်နှစ်ခွဲ-အမှတ်တစ်ဦးချင်းစီအခြမ်းကိုသွားအတူ။ အဲဒီမှာတစ်တစ်ကမ္ဘာလုံးဖလားအတွက် 28 ပွဲဖြစ်ကြောင်း, ဒါကြောင့် 28 မှတ်ရှယ်ယာမှာရှိပါတယ်။ ယခင်တစ်ကမ္ဘာလုံးဖလားအနိုင်ရသောအသင်းကကျင်းပရန် 14 မှတ်လိုအပ်ပါတယ်; အခြားဘက်ခြမ်းဟာဖလားယူ 14.5 မှတ်အနိုင်ရရမည်ဖြစ်သည်။
နေ့ 1 ရက်နေ့တွင်လေးခု foursomes ပွဲလေးဘောလုံးလေးလုံးဘိလိယက်ကစားနည်းများပွဲရှိပါတယ်။
တဦးတည်းပုံစံမွန်းလွဲပိုင်းတွင် session တစ်ခုထဲတွင်နံနက် session တစ်ခုနှင့်အခြားကစားနေသည်။
foursomes နှင့်ဘောလုံးလေးလုံးဘိလိယက်ကစားနည်းများ၏-ရာကို formats ၏အမိန့်နံနက်အချိန်၌ session တစ်ခုအတွက်ကစားနှင့်အိမ်တွင်းအသင်းကပ္ပတိန်များကဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်မွန်းလွဲပိုင်းတွင်-ဖြစ်ပါတယ် session တစ်ခုအတွက်အရာဖြစ်ပါတယ်။
အဖွဲ့ USA နဲ့အဖွဲ့ဥရောပတစ်ဦးချင်းစီနှစ်ခုအစည်းအဝေးများ၏တစ်ဦးချင်းစီစဉ်အတွင်းကစားရှစ်ဂေါက်သီးရှိသည်။ သူတို့ 12-လူတစ်ဦးအဖွဲ့များရှိကတည်းကအသင်းနှုန်းလေးဂေါက်သီးနှစ်ခုအစည်းအဝေးများအသီးအသီးထွက်ထိုင်ရပါမည်။
Day2တွင်နောက်ထပ်လေး foursomes ပွဲနှင့်အခြားလေးဘောလုံးလေးလုံးဘိလိယက်ကစားနည်းများပွဲရှိပါတယ်။
အဆိုပါအမိန့်-သောနံနက် session တစ်ခုအတွက်ပထမဦးဆုံးအတတ်, foursomes သို့မဟုတ်နေ့ 1 ရက်နေ့ကကဲ့သို့တူညီသောဘောလုံးလေးလုံးဘိလိယက်ကစားနည်းများ-ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာအလုံးစုံ, ပထမဦးဆုံးနှစ်ရက်ကျော် 16 ပွဲတစ်ဦးစုစုပေါင်းပါဝင်သည်ဟုလေး Doubles အစည်းအဝေးများရှိပါတယ်, အတစ်ကမ္ဘာလုံးဖလားမှာနှစ်ဆပွဲစဉ်ကစား၏နောက်ဆုံးအချိန်ကာလသတ်မှတ်နေ့, ဒါ။
နေ့3ရက်နေ့တွင် 12 ဆိုရင် single ပွဲရှိပါတယ်။
အဖွဲ့နှုန်း 12 ဂေါက်သီးရှိပါတယ်ကတည်းကလူတိုင်းတစ်ဦးတစ်ကမ္ဘာလုံးဖလား၏တတိယနှင့်နောက်ဆုံးနေ့၌ကစားဆိုလိုသည်။
နောက်ဆုံးနေ့၌ 12 ပွဲနှင့်အတူတစ်တစ်ကမ္ဘာလုံးဖလားစဉ်အတွင်းကစားပွဲများ၏စုစုပေါင်းအရေအတွက်က 28 ဖြစ်ပါတယ်။
အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ပေါ်မှာရှိသမျှကစားသမားသုံးရက်မြောက်သောနေ့၌ထိုဆိုရင် single session တစ်ခုကစားရမည်ဟုနောက်တဖန်သတိပြုပါ။ သို့သော်အသင်းနှုန်းသာရှစ်ဂေါက်သီးနှစ်ဆအစည်းအဝေးများအသီးအသီးအဘို့လိုအပ်နေပါသည်။
တစ်ကမ္ဘာလုံးဖလား Format ကိုအပြောင်းအလဲများကျော်အချိန်
အဆိုပါတစ်ကမ္ဘာလုံးဖလားပုံစံပြိုင်ပွဲသမိုင်း၌အကြိမ်ပေါင်းများစွာပြောင်းလဲခဲ့ပါသည်။ အစောပိုင်းကာလများတွင်တစ်ကမ္ဘာလုံးဖလားမှာဂေါက်သီးနှစ်ခုပွဲအသီးအသီးအများဆုံးကစား; 1960 နှင့် 1970 အချို့နှစ်များတွင်နောက်ဆုံးနေ့၌နှစ်ခုဆိုရင် single အစည်းအဝေးများ (နံနက်ပိုင်းနှင့်မွန်းလွဲပိုင်း) ရှိခဲ့သည်။
အဆိုပါတစ်ကမ္ဘာလုံးဖလားရဲ့သမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးအသုံးပြုသောအပေါငျးတို့သပုံစံများအဘို့အတွေ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ်ကမ္ဘာလုံးဖလားသမိုင်း အင်္ဂါရပ်။ ဤရွေ့ကားအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှအကြီးမားဆုံးအပြောင်းအလဲနေသောခေါင်းစဉ်:
1927: တစ်ကမ္ဘာလုံးဖလားနှစ်ရက်ကျော်ရှယ်ယာမှာ 12 မှတ်စုစုပေါင်းနှင့်အတူမိတ်ဆက် - လေး foursomes နှင့်ရှစ်ဆိုရင် single ။
1961 : ကိုက်ညီမှုများ 24 12 ကနေနှစ်ဆ။
1963: ဘောလုံးလေးလုံးဘိလိယက်ကစားနည်းများကိုပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့ကစား; ဒါ့အပြင်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့, ပြဇာတ်သုံးရက်တိုးချဲ့။
1981: ယနေ့အသုံးပြုသောအတိအကျပုံစံ, ရှယ်ယာမှာနေ့စဉ်အချိန်ဇယားနဲ့ရမှတ်၏စည်းကမ်းချက်များ၌, ပထမဦးဆုံးအကြိုးသကျရောသို့ဝင်။
တစ်ဦးအမျိုးသားများရဲ့ဂေါက်သီးဗိုလ်မှူးအတွက်နိမ့်ဆုံးက Round: အဆိုပါအားလုံးသည်အချိန်ကအကောင်းဆုံး
PGA Tour အပေါ်တစ်နှစ်တာ၏ကစားသမားများ
ဗြိတိန်ပွင့်လင်းဂေါက်သီးရိုက်ပြိုင်ပွဲများ၏နောက်ဆုံးအပျော်တမ်း Winner သူကားအဘယ်သူခဲ့သလား
အဆိုပါ PGA Tour ရဲ့ရှေးအကျဆုံးလူသစ်
1973 ခုနှစ်ဗြိတိသျှတို့ပွင့်လင်း: Weiskopf ဝင်းများအတွက် Cool သိမ်းထားပြီး
အဆိုပါမာစတာပြိုင်ပွဲများ၏6အများစုမှာအံ့သြစရာ Winners
အမေရိကန်အမျိုးသမီးများ၏ Open ဂေါက်သီးရိုက်ပြိုင်ပွဲ
PGA Tour တွင် AT & T က Byron နယ်လ်ဆင်
ဂေါက်ကွင်းအတွင်း Umbrella ဂိမ်း Play လုပ်နည်း
မာကျူရီ Messenger မှာရဲ့နောက်ဆုံးကျဆင်း
1812 ၏စစ်ပွဲ: Crysler ရဲ့လယ်ယာ၏တိုက်ပွဲ
Melania Trump ဟာသ
Scrivener နှင့်အတူ Evernote အသုံးပြုခြင်း
'' Dar '' ၏ conjugation
အဆိုပါ Beltane ဘေးလ်မီးသတ်ထုံးတမျးစဉျလာ
အစ္စလာမ်ဘာသာအတွက်ကောင်းကင်တမန်များ: Hamalat Al-Arsh
အဆိုပါဂျိုးဘိုင်ဒန် Plagiarism ဖြစ်ရပ်မှန်
Fore! အဆိုပါဂေါက်ကွင်း Term ၏အဓိပ္ပာယ်, Plus အားရတဲ့အခါများနှင့်မည်သို့ဒါဟာအသုံးပြုနည်း
လိင်တူချစ်ခြင်းအပေါ် Presbyterian ဘုရားကျောင်းရဲ့ရာထူးဆိုတာဘာလဲ
မည်သို့မှ 50-50 ကြိတ်ဆုံနှင့်ကြိတ်တဲ့စကိတ်စီးပေါ်
ဘယ်အချိန်မှာ Bigfoot တိုက်ခိုက်မှုများ
ESL Classes ရဲ့များအတွက်စာလုံးပေါင်းပြဿနာများနှင့်အတူအကူအညီ
အဆိုပါ Coen ညီအစ်ကိုများလှမျးမိုးမှုခံရ7Classic ရုပ်ရှင်ရုပ်ရှင်
နှစ်သစ်ကူး Reflection Quotes နှင့်စကား
PGA Championship ပြိုင်ပွဲမှတ်တမ်း: ပြိုင်ပွဲများ Best
ဓာတုဗေဒအတွက် Isomer အဓိပ္ပာယ်နှင့်ဥပမာများ
ဘယ်လိုတွေ့ဆုံနှင့်အဘိဓါန် Moroccan ယဉ်ကျေးမှုအတွက်နှုတ်ဆက်ဖို့
ဂျိုးဇက် Baker အတ္ထုပ္ပတ္တိ
အဆိုတော်များ '' sketchbook နှင့် Drawing စာအုပ်များရွေးချယ်ခြင်း
အန်တိုနီဘန်း: ပြေးသောသူကို Slave ဥပဒေထွက်ပြေးလာသူ